Awusayi kuphinda ukhumbule iiphasiwedi zakho kwi-Android | I-Androidsis
Awusayi kuphinda ukhumbule iiphasiwedi zakho kwi-Android
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izaziso, Khu seleko
Ukuba uyintlekele yokungena okanye ukukhumbula ipassword zezi ziindaba ezimnandi. Kuqhelekile ukuba sihambe ngobuhlanya ngeakhawunti ezininzi, izitshixo ezininzi kunye nezicelo ezininzi ezahlukeneyo. Ngakumbi xa zonke iingcali zicebisa ukuba singabeki igama elifanayo kuyo yonke into. Kuya kusiba nzima ukuzikhumbula zonke.
Inkqubo yokusebenza ye UGoogle usandula ukufumana isatifikethi seFIDO2. Oku ibona i-Android njengendawo ekhuselekileyo apho sinokusebenzisa khona ipassword ngaphandle kokuwakhumbula. Ukukhetha inkqubo yokhuseleko ye-smartphone yethu eyona isiqinisekisayo, ukuvula iphethini, ukubhalwa kweminwe, njl. singazichaza nakusiphi na isicelo okanye iwebhu ngokukhuselekileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso.
I-Android yindawo ekhuselekileyo yeepassword zakho
Ngaba uyazi ukuba yintoni isiqinisekiso seFIDO? Isifinyezo se UFido, eguqulelwe kwiSpanish "Uchazo olukhawulezayo kwi-Intanethi". Umbono owenziwe ziifemu zobuchwephesha ezininzi ezisebenza kunye ukuphumeza iindlela ezikhuselekileyo nezilula zokuqinisekisa. Izitshixo kunye neesistim ezisetyenzisiweyo iminyaka kwinqanaba leshishini kwaye kungekudala ziya kufumaneka kwabanye abasebenzisi.
Kwimivumbo ebanzi, kwaye icaciswe ngendlela efikelelekayo, inkqubo yokusebenza iya kwenza isazisi ngokwedijithali ngesazisi. Oku kunokuba ngumnwe okanye ukubonwa kobuso. Y obu bungqina buya kusetyenziswa sisixhobo sethu kwiakhawunti nganye, kwiwebhu okanye kwisicelo ukuba sifuna ukuzazisa. Yonke loo nto ngokukhuselekileyo nangaphandle kwesidingo sokukhumbula nayiphi na iphasiwedi.
Kubonakala ngathi obu buchwephesha butsha Ukuza kwii-smartphones zethu kungekudala ngohlobo lokuhlaziya inkqubo kaGoogle ngeGoogle Play. Zonke izixhobo ze-Android ezivela kuhlobo lwe-7.0 ziya kuxhaswa, eziziindaba ezimnandi zabasebenzisi beminxeba abaneminyaka ubudala. Kwaye iya kuba yipesenti ephezulu yabasebenzisi abaya kuba nakho ukuyisebenzisa.
Okokugqibela, abo banememori encinci, abangazi nto okanye abo bakuthiyileyo ukudala igama eligqithisiweyo kwiwebhu nganye okanye usetyenziso luya kuba nentuthuzelo. A Itekhnoloji ekulula ukubonwa ngabasebenzisi kodwa apho iiyure ezininzi zomsebenzi kunye nophuhliso lutyalomali. Kwaye oko kuya kukhokelela kwi- amava oxinzelelo oluncinci kunye nokukhululeka ngakumbi komsebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » Awusayi kuphinda ukhumbule iiphasiwedi zakho kwi-Android
I-Spyro yakho oyithandayo, abalinganiswa beDragoni ngoku abakhoyo kwi-Skylanders Ring of Heroes